လွှတ်တော်ရှေ့ သူ့အလံ လာစိုက်ချင်နေသော တရုတ် နှင့် ဖျက်မြင်း ပူတင် နဲ့ ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆွကြည့်ခြင်း – အပိုင်း ( ၂ ) – Na Pann San
လွှတ်တော်ရှေ့ သူ့အလံ လာစိုက်ချင်နေသော တရုတ် နှင့် ဖျက်မြင်း ပူတင် နဲ့ ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆွကြည့်ခြင်း – အပိုင်း ( ၂ )
Na Pann San W | August 1, 2020 | International News | No Comments
အပိုင်း ( ၁ ) ဖတ်ချင်ပါက လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ – https://napannsan.com/?p=33592
သို့ အတွက် .. တရုတ်ဟာ US နဲ့ အရေးအတွက် အရှေ့ဘက်ခြမ်း မှာ လှုပ်ရှားမှုဖြင့်၊ ကမ္ဘာက စောင့်ကြည့်ေ နတဲ့ အတွက် MA နဲ့ ပေါ်တင် ညှိမရပေမယ့် ၊ သူ့မွေးစားသား လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ရှိသမျှ အင်အား ကို စုစည်းထားစေပြီး ၀ကို ပွဲ ထုတ်လာတယ် ။
ထို့အတူ အီရန်နဲ့ လည်း မိတ်ဖက်ထားပြီး၊ ရုရှားနဲ့ လည်း ပေါင်းစည်း ထားတယ် ။ သို့သော် ဒီအခြေနေတွေကို မြင်သလောက် တူးဆွကြည့်ရရင် ..
ကမ္ဘာ့စစ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများ ကို တူးဆွကြည့်ခြင်း
တရုတ် ဟာ သူနဲ့ အနီးဆုံး ဒီအရှေ့ဘက် အခြမ်း မှာ စစ်ရေး အတွက် မွေးစားသား လက်နက်ကိုင်တွေကို စုစည်းထားပြီး၊ ထိုအထဲကမှ အင်အားတောင့်တင်းဆုံး ၀ကို ပွဲထုတ်ပြီး မြန်မာကို ဖြဲခြောက်လန့် ဟန့် ထား တယ် ။ ဒါဟာ စစ်ရေးအရ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားခြင်း သဏ္ဍန်ပေါ့။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူတ့်ုိလို ပါချီပါချပ် အနေထားလေးတွေ နဲ့ တရုတ် အားကိုးပြီး စစ်ရေးထပြမရ ၊ နှောင့်ပြမ ရ၊ လေ့ကျင့်ပြမရ ၊ လေကျယ် မရနဲ့ ဆိုတော့ မီဒ်ီယာနဲ့ ဟန်ရေးလောက် သာပြပြ်ီး၊ လူလုံးထွက်ပြပြီး ၊ နိုင်ငံရေးအရ ကန့်လန့် တိုက် ဟန့်ပြခြင်း သာ ရတဲ့ အတွက် ၊ ဒါဟာ သူ တို့ စစ်ရေး ပြခြင်း၊ ခြိမ်း‌ခြောက်ခြင်းပဲပေါ့ မဟုတ်လား။
US က တရုတ်ဘက် ကို မပါစေရန် အစ္စရေး နဲ့ ထိန်းထား ခိုင်းပြီး ၊ ရေနံ သဘော်၊ ကား ၊ ပိုက်လိုင်း စသည့် တို့အား ဖျက်စီး ဖောက်ခွဲ မီးရှို့ ထားပြီး ၊ တရုတ်ကို ရေနံဖြတ်တောက်ဖ့်ိုနဲ့ အီရန်ကို အေးဆေးနေ ဖို့ သတိပေးထားပေ မယ့် ၊
ယခုအခါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေတယ် ဆိုတာ တရုတ်ဘက် ကို ပါဖို့လား ၊ ပါဖို့ထက် သူ့ဂုဏ် သိက္ခာကို ပြန်တင်ပြီး ပါဝါ တင်ပြနေခြင်း သာ ဖြစ်သည် ဟု တွေးဆ မိသည်။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် သူသာ တကယ် လုပ်မည် ဆို သူ့ကို နှိပ်သွားသော အစ္စရေး ကို ပြန်စော်ပြရမည် မဟုတ်လား ။ သို့ပေမယ့် တရုတ်အချက်ပြမှုနဲ့ US စတင်မှုကိုလည်း စောင့်နေဖွယ်ရှိပြီး ပြန်မတုံ့ပြန်တာလည်း ဖြစ်မည်။
ဒ်ီ အတွက် US ရန်မှနေ ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး ပြန်လည် တုံ့ပြန်ရန်အတွက် စစ်ရေးကြိုတင် ပြင်ဆင်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့ပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ယခုလို အမေရိကန်လေယဉ်တင်သဘော်ပုံ စံနဲ့ အခြေစိုက် စခန်းနား အထိ ဒုံးကျည်များ ပစ်လွှတ်ပြီး
စစ်ရေးလေ့ကျင့်တယ် ဆိုတော့၊ US နဲ့ တရုတ် စစ်ဖြစ် လျင် အီရန် ပါလာနိုင် ဖွယ် ရှိသည် ဟု ယူဆရပြီး၊ အစ္စရေးကို မတုံ့ပြန် တာက တရုတ်က အချက်မပြသေးလို့ ဖြစ်ပြီး၊
သူ သာ ပြန်တုံ့ပြန်ရင် ပွဲက စပြီး တရုတ် ပါဝင်လာ ရတော့ မှာ ဖြစ်သောကြော င့်၊ ထို့အပြင် US နဲ့လည်း ပွဲက စပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ ယခုအခါ ဟန်ကို မာန့်ဖို့ဘို့အတွက်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်၊ စစ်ရေးပြနေပြီး ပြန်လည် ဖြဲခြောက်ပြနေခြင်းသာ ဖြစ် သည် ဟု မှတ်ယူ မြင်မိသည်။
ပြောရရင် အရှက်ခွဲခံထားရမှု ကို အရှက်ပြေ ပြန်လုပ်ပြနေခြင်းပဲ ဟု မြင်မိပေမယ့် US ကို အခဲမကျေမှုကြောင့် သတိတော့ ထားရပါလိမ့်မည်ဟု။
ဒီပွဲမှာ ရုရှား ဟာ အထူး အရေးကြီးပြီး ကြောက်စရာကောင်းသော ဖျက်မြင်း အဖြစ် ရှိနေသည်ကို အထူးသတိထား ရမည် ဖြစ်သည်။ ပြောရရင် ရုရှား ပူတင်သည် ငွေရရင် ဘာမဆို လုပ်မည့် လူစားလည်း ဖြစသည်။
သူသည် အလယ်ဒိုင် ခွချက် ဝှတ်ဖဲ နဲ့ ခန့်မှန်း ရခက်သူ ခြံခွ လူလည်ဖြစ်၍၊ အင်မတန်မှ ကြောက်စရာကောင်းသော သွေးအေး ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်၍ စစ်ပွဲရဲ့ အခြေပြုမှုကို စောင့်ကြည့်ကစားပြီး ပွဲရလဒ်အဖြေကို ဆုံးဖြတ်ပေး မည့် ဒိုင် သို့ အထိုင် ဆိုလည်း မမှားပေ။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် .. အိန္ဒိ ကို လက်နက်ရောင်းပြီး၊ တရုတ်ကို ပူးပေါင်းကာ ကမ္ဘာ့အရေးမှာ ရပ်တည်မည်ဟု ကြေငြာပြီး၊ စစ်ရေးပြင်ဆင်နေမှုကလည်း သူ့အတွက်လား၊ တရုတ်အတွက်လား သို့ တဖက်လှည့် နဲ့ ပူတင်ကြီး ဘာတွေလုပ် ဖို့ ဟန်ရေးပြနေသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းသလို၊
တရုတ်ကို S400 တွေ မရောင်းဘူး ကြေငြာလိုက်တယ် ဆိုတာကလည်း ပူတင်ကြီး ရဲ့ တမင် မျက်လှည့် ပြကွက်တွေသာ လှည့်စားမှုတွေသာ ဖြစ်တယ်ဟု မှတ်ယူပါတယ်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အိန္ဒိယကို လက်နက် ရောင်းပြီး တရုတ်အား ရောင်းမည် ဆိုပါက ရန်တိုက်ပေးရာ ကျပြီး စစ်ပွဲကို ကြားကနေ ဖန်တီးနေတဲ့ သူဟာ ပူတင်ပါလို့ မြင်လာနိုင်တဲ့အတွက်၊ ထို့မပြင် လက်နက်ရောင်းပြီး ရောင်းရဖို့ အတွက်
နိုင်ငံခြင်း ခွပ်ခိုင်းပြီး ကြားမှနေ အမြတ်ထုတ်ယူသူဟာ ရုရှားဟု စွတ်စွဲလာနိုင်သည့်အပြင်၊ စစ်ပွဲကို စတင်ဖို့ ဖန်တီးပေးရာကျသောကြောင့် ပူတင်က ပါးနပ်စွာဖြင့် မရောင်းဟု ကြေငြာ အသိပေးပြီး
၊ ဒီစစ်ပွဲ မှာ သူမ ပါဟု ရှောင်လွဲသဏ္ဍန်ပြကာ တရုတ်နဲ့ မိတ်ဖတ်လိုမှုကို မခွာလိုကြောင်း၊ အရိပ်မွတ်ပါ ပြသပြ်ီး စစ်ရေး လေ့ကျင့်နေသည်ဆိုသည်မှာ ပူတင်သည် ခန့်မှန့်ရခက်သော လူလည် ပက်ကား တစ်ယောက် ဆိုတာထက် ကြောက်စရာကောင်းသော ဖျက်မြင်းတစ်ကောင် ဆိုတာ တွေ့မြင်နိုင်လေသည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုလက်နက်တွေ ကို တရုတ်အား မရောင်းဘူး ဆိုပေမယ့် နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေတဲ့ ပူတင်အဖို့ အချိန်မရွေး တရုတ်ပြည်တွင်းသို့ သယ်ယူ ပို့ပေးနိုင်လေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ။
ဒီ့အတွက် သန်းရွှေတို့တောင် သူတို့ လက်ထက်ခေတ်က တရုတ် နဲ့ ရုရှားက လက်နက်တွေ ကို သီလဝါကနေ တဆင့် သံလျင် ပါရီလမ်းတလျောက်ကနေ မဂ်လာဒုံကို ညည ကားကြီးတွေ နဲ့ နေ့စဉ် တောက်လျောက် လပေါင်းများစွာ သယ်ယူပို့ဆောင်နေ တာ လုပ်ခဲ့ ရင် ဒီကေ့စ်ဟာ တရုတ် ရုရှား အတွက် အသေးဖွဲပါပဲ။
ဒါကို နာမည် ကောင်းယူပြ လှည့်စားပြဖို့ အတွက် ကမ္ဘာကို ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြနေပြီး ရုရှားဟာ တရုတ်ကို S400 တွေ မရောင်းဘူး ကြေငြာပြောနေတာဟာ လူရီစရာ လှည့်ကွက်ဖြစ်သလို
၀ယ်လည်း အမေရိကန်ရဲ့ 35 တွေကို မဟန့် တားနိုင်လို့ ဂျင်းလက်နက်တွေကို ငွေကုန်ခံပြီး မ၀ယ်ဘူးဆိုတာ၊ သို့ပေမယ့် ရေနံပွဲစားခအဖြစ်တော့ တရုတ်ကြီးကို အပေးယူ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မယုံကြည်ရသော အာဏာရှင်နှစ်ကောင် လှည့်ကွက် အဖြစ် ရှု့မြင်ပြီး
ရုရှားဟာ စစ် မှာ ပါမလား မည်သူ့ ဘက်ပါ မလဲ ဆိုတာ နဲ့ မည်သူတွေကို လက်နက်ရောင်းပြီး ဒိုင်အဖြစ် စားမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် စောင့်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းလှပါသည်။
ခွေးလေးခုန် လို့ ဖုန်မထပါဘူး ဆိုသလို ကမ္ဘာ့အရေး မှာ သူ့နာမည်ကျကျသွားရင် လူရာဝင် ထင်ပေါ်ချင်လို့ ဇာတ်ကို တမျိုးပြီး တမျိုး ဖန်တီးကပြတတ်တယ် ခုတော့ ငြိမ်နေသလို ရှိပေမယ့် ဘယ်ချိန်ထကြွ ဖြဲပြမလဲ မသိပေမယ့် အငတ်ဘေးကနေ နည်းနည်းသက်သာ သွားလို့ ငြိမ်နေခြင်းဟာ နောက်ကွယ်က ဘယ်သူ ထောက်ပံ့နေသလဲ စဉ်းစားစရာပါ။ နောက် ဂျပန်က စစ်ရေးအရ ထကြွပလာတော့ ၀ပ်ဆင်းသွားပြီး အရင်လို ဇောင်းမကြွရဲတာလဲ ပါလိမ့်မယ်။
သို့သော် သူ့ကိုတော့ လျော့တွက်မရပဲ တရုတ်ဝှတ်ဖဲအဖြစ် ဘယ်ချိန် ဘာလုပ် လမ်းကြောင်း အာရုံလွှဲမလဲ မျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်ရင်း၊ သေချာတာကတော့ ဂျပန်ကို အရင်လို သွားမစ မဖြဲရဲတော့ပါဘူးဟု။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ဂျပန်က .. US လို အကျိုးမြတ်အတွက်နဲ့ တောင်ကိုရီးယားအတွက် ကာဗာလုပ်နေရလို့ မြောက်ကို ချော့ထိန်းနေပေမယ့်၊ ဂျပန်က ငယ်နိုင်တွေကို ဘာမျက်နှာမှ ထောက်စရာ မလိုတဲ့အတွက် ဒီတခါ သူ့လာစရင် ပြန်ဝုန်းပြလိမ့်မယ်ဟု ယူဆမိပြီး၊ အနည်းဆုံး ဟိုက်ပါဆိုးနစ်တွေ ပစ်ပစ်ပြပြီး ပြန်ဖြဲပြတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊
တရုတ်နဲ့ မြောက်ပု အနိုင်ကျင့်မှုမှေ န လွတ်မြောက်အောင် အတွက် ခုကတည်းက စစ်ရေးကို ပြင်ဆင်လာနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ မြောက်ပုဟာ မကြာခင် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်က ချုပ်ငြိမ်းသွားမည့် နိုင်ငံပါဟု မြင်နေမိပြီး၊ ယခု တရုတ်နဲ့ စစ်ရေး မှာ ဝှတ်ဖဲ အဖြစ် ပါနိုင်မလား စောင့်ကြည့် ရပါလိ မ့်မယ်။
ထရန့် ဘာလုပ်နေ သလဲ ဆို ဆေးစောင့်နေ တယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရွေ့ပြီး တရုတ်ပြိုလဲကျတဲ့အထိ အချိန်ဆွဲ စောင့်နေတယ်။ ထိုအရာတွေ အချိန်ကျပြီး သူ့လက်ထဲရောက်လာပြီဆို စစ်ပွဲကို အနည်းဆုံး တောင်ပင်လယ် မှာ စလိမ့်မည် ဟု ယူဆမိ တယ်။
အ ခုတော့ အီရန် ရေနံလိုင်းကို ဖြတ်တောက် ဖျက်စီးထားပြီး တောင်ပယ်လယ်နဲ့ ဘဂ်လားပင်လယ်အော်မှာလည်း ပိတ်စို့ဝန်းရံထားသောကြောင့် အီရံ၏ ရေနံမျာ ရုရှားကုန်းမြေမှ တဆင့် တရုတ်သို့ ပို့ဆောင်ပြီး လုပ်ဆောင်နေ ရတယ်။
ဒါကြောင့် ထရန့် ဟာ ပူတင်ဆီ နူးကလီးယားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးတယ်ဆိုပေမယ့် ရေနံကိစ္စပါ ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ပူတင်က လက်နက်မရောင်းရေ သးတော့ ကြားကနေ ပွဲစားလုပ်ပြီး ရေနံပို့နေ တယ် အီရန်ထံကနေ တရုတ် ကို ။
ဒါကြောင့် တရုတ်ကို အဖက်ဖက်ကနေ ဖြတ်တောက် ပိတ်စို့နေတဲ့ ထရန့်ဟာ ရုရှားကို တရုတ်ထံ ရေနံ မပို့ဖို့ ကြိမ်းသေဆော်သြမှာပဲ။ ရေနံဖြတ်မှ ထုတ်ကုန်လျော့မယ် ကုန်သွယ်မှု ပိုကျဆင်း မယ် မဟုတ် လား ။
ဒီတော့ တရုတ် ကို ထုတ်ကုန် စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ အစစအရာရာ ပိတ်ဆို့ပြီး ပြိုလဲအောင် ထောင်ခြောက်ဆင်နေပြီး သူ့ပြည်သူတွေ ပြန်ပုန်ကန် ဆူပူတဲ့အထိ လုပ်လိုက်ရင် တရုတ်ကို စစ်တောင် တိုက်စရာ မလိုဘူး ကွန်မြူနစ်ပါတီ နဲ့ ရှီတို့အဖွဲ့ပြုတ်ကျပြီး စစ်ရှုံး အညံ့ခံ ဒူးထောက်လာမယ်ဆိုတာ
ထရန့်က အကွက်ချ သေချာ လုပ်နေပုံပါပဲ။ ခုဆို တရုတ်စား နပ်ရိက္ခာ ပါ ပြသနာရှိ လာတဲ့ အတွက် အီကွေဒေါဘက်သွားပြီး ငါးတွေ ခိုဖမ်းနေရတယ်။ တောင်ပင်လယ်ကို ချေမချရဲဘူး။ ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည် ပဲခူးနယ်က ၀က်‌တွေဝယ်ပြီး ကြယ်ခေါင်ကနေ ပို့တယ်ကြားတယ် ။
သူတို့ဆီက ၀က်တွေ က ASF ဖြစ်ပြီး သေကုန်လို့။ အဲ့ဒီ ASF တွေက လေးနှစ်အထိ ပိုးမသေပဲ ပြန်မွေး ပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့ ပိုးကူးဝက်‌တွေကို အကုန်ရှင်းထုတ်နေတာနဲ့ အကောင်ရေနည်း ရိက္ခာပြတ်လက်မှု နဲ့ ကြုံနေရပြီဆိုတော့၊ ခု ပဲအိတ်တွေကို ရေတမံပိတ်ဖို့ လုပ်တယ်ဆိုတာ ထိုပဲတွေက တိရိစ္ဆာန်အစာအဖြစ် အသုံးပြုတယ် သိရပြီး၊ ရေကြီး မိုးရွာ မှိုတက်ကုန်လို့ အဲလို့ လုပ် တယ် ခန့်မှန်း မိတယ်။ အလကားနေတော့ အဲ့လို သုံးဖြုန်းမယ် မထင်မိဘူး။ ဒီတော့ တရုတ်တို့
ရေဘေး – အလုပ် လက်မဲ့ – စီးပွား ထုတ်ကုန် ပိတ်ထားမှု – ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှု မရှိမှု – ရေနံဖြတ်ထားမှု – သွင်းကုန် ထုတ်ကုန် နဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ ဖြတ်ထားမှု – တောင်ပင်လယ် နဲ့ ဘဂ်လား အား ပိတ်ဆို့ထားမှု – ငွေကြေး ရိက္ခာ နည်းလာမှု – ကမ္ဘာမှ အရေးယူပိတ်စို့ထားမှု
စသည့် ပြစ်မှုပေါင်းများစွာ နဲ့ ဘေးကြပ်နံကြပ် တင်မက ထွက်ပေါက် အရပါ မရှိတော့သော တရုတ်အဖို့ ယခုလို ကမ္ဘာက ဝိုင်းညှပ်ပိတ်ဆို့ ထားချိန်မှာ တရုတ်ဘာကြောင့် မတုန့်ပြန်ပဲ ငြိမ်နေပြ်ီး ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ အချိန်ယူနေသလဲ ဆို
ဒ်ီအခြေနေကို ကြိုတင် တွက်ဆမိ လို့ သူ့နိုင်ငံ ကိုဗစ်အပြီးကာလမှာ အီကန်ကနေ အောက်ဈေးနဲ့ တစ်နေ့ကားအစီး ၁၇၀ ကျော်နဲ့ သယ်ယူဏယ်ထားတဲ့ ရေနံဟာ နောက်ထပ် နှစ်လလောက်အထိ တောင့်ခံ နိုင်အုံးမှာ ဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကြားထဲက ရေနံပွဲစားလုပ် အမြတ်ထုတ်နေတဲ့ ပူတင်ဆီ ထရန့်ဖုန်းဆက် ဟန့်တားပြောရတာ မဆန်းပါဘူး။
ဒါ့ အပြင် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် နဲ့ US ကာချုပ် ‌‌တွေ့ဆုံမှု၊
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကို သွားရောက်လေ့လာမှုတွေ အရ၊ နောက် ‌တောင်တရုတ်ပင်လယ်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်တွေမှာ USတို့ ပိတ်ဆိုထားမှုကြောင့်၊ မူးယစ်နဲ့လက်နက်မှောင်ခိုလမ်းကြောင်း‌တွေ ပြတ်တောက်ပြီး၊ သာကော တို့ အရင်လို ဗိုက် မဖေါင်းတော့ဘူး ။ နောက် ပြည်တွင်းမှာ မူးယစ်ဖမ်းဆီးရမိမှုကလဲ ယခင်ထက် နည်းသွားတယ် ( မြန်မာပြည်က ‌ဆေးပြားဖမ်းတာမျိုးကို မဆိုလိုပါ။ထိန်းချုပ်ဓါတုနဲ့ ဆပ်စပ်ပစ္စည်း အများအပြား ဖမ်းတာမျိုး ဆိုလိုခြင်းဖြစ် )
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ .. မြန်မာ မှာ ကုန်ကြမ်း နဲ့ ထိန်းချုပ် ဓါတု ပစ္စည်း မထွက် ရှိတာသိတဲ့ USက၊ တရုတ်နဲ့တရုတ်မယားပါသားများလုပ်ကိုင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကို၊ မြန်မာပြည်အပြင်ဘက် ထိုင်းနယ်စပ်ကနေပိတ်ဆို့တော့မဲ့အခြေအနေလို့သုံးသပ်လို့ ရတယ် ။ ဒီ့အတွက် မြန်မာပြည်တွင်းကို x-ray စက်ပေးလိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စုလမ်းမပေါ် စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ခါ
မူးယစ် လက်နက်နဲ့ အဆီအစ်နေတဲ့ တရုတ်မွေးစားသားအရိုးကိုက် တစ်စု အထိနာပြီး x-ray စက်ကို လာပစ်ခတ် ဖျက်ဆီးပြီး အစိုးရကို တရုတ်အလိုကျ ဆန့်ကျင်ပြတဲ့ အခြေနေတ စ်ခုထိ ဖြစ်ခဲ့ တယ် မဟုတ်လား။ နောက် ‌ကျောက်မဲ နောင်ချိုနယ်ထဲ အထိထိုးဖေါက်လာပြီး၊ ရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့ အာရုံလွဲ မျက်လှည့်ပြကွက်လုပ်သွားသေးတယ်။
အခုလဲ ထိုင်းနယ်စပ် မှာ တရုတ် ရဲ့ ဘဏ္ဍာ ကို ‌အောက်လမ်းနည်းနဲ့ဖြည့်နေတဲ့ လမ်းကြောင်းကို US ထိန်းချုပ်တော့မယ်။ ဟိုယခင် KNU အင်အားတောင့်တင်းစဉ်ကာလတုန်းက ထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ဟာ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် မှာ မြွေဟောက်စစ်ဆင်ရေးနဲ့စစ်ရေးပူးတွဲလေ့ကျင့်ခဲ့ဘူးလို့ ဒီနယ်မြေဟာ US နားရွက်ရာတွေချည်းဘဲဆိုတာ တရုတ် သတိပြုရတော့ မယ်။
အခုလည်း ထိုင်း အမေရိကန်ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မလား။ထိုင်းဘက်ခြမ်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအဆင့်မြင့်x-rayစက်တွေတတ်ဆင်ပေးမလား တစ်ခုခုဘဲ။ အဲ့ဒီကစားကွက်နဲ့ အညီ အမေရိကန်ကမူးယစ်တေးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို black list သွင်းပြီး ခွန်ဆာကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်သလို လုပ်ခဲ့ရင် မွေးစားသားများခွန်ဆာလို အယောင်ပြ အစိုးရထံ လက်နက်အပ်ပါလိမ့်မယ်။
သို့ပေမဲ့ ယခင်အစိုးရက ခွန်ဆာကို လက်ခံပြီး အမေရိကန် ကို မသိကျိုး ကျွံပြုခဲ့ပေမဲ့ ။ ယခု အစိုးရက သူ့သိက္ခာအကျခံပြီး USထံ မလွဲပေးဘဲ အကာအကွယ်ပေးလိမ့်မယ်မထင်ဘူး။ တဖြေးဖြေး လူဆိုဖမ်းပွဲကရုပ်လုံးပေါ်လာလိမ့်မယ် ဆိုတာ သိစေချ င်တယ် ။
ဒါ့အပြင် အနောက် နဲ့ အမေရိကန်မှာ စာအိတ်ထဲ သီးနှံမျိုးစေ့တွေ ထည့်ပြီး ပေးပို့ လုပ်ဆောင်ထားမှုဆိုတာကလည်း စားနပ်ရိက္ခာအတွက်နဲ့ ဖြတ်တောက်ဖို့နဲ့၊ ဓာတုအဆိပ်သင့်ဖို့၊ ဖျက်ပိုး များနှောင့်ပြီး တိုင်းပြည်၏ ရိက္ခာအတွက် ဖြတ်တောက် ဒုက္ခရောက်စေဖို့ လုပ်ကြံမှု တိုက်ခိုက်မှုဟုသာ ထင်မိပြီး၊ စာအိတ်ထဲမှာ ဒေါင့်သန်းရောဂါပိုးမွှားများ နဲ့ ဓာတုအ ဆိပ်သင့် လက်နက်များ ထည့်ထားပြီး တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တွေကို ပြန်လည် မြင်မိ အောက်မေ့စေပါသည်။
သို့အတွက် ထိုအရာများ ကို အသုံးမပြုကြရန် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများမှ ဆော်ဩထားသလို၊ ထို လုပ်ရပ်အား တရုတ်မှ သူမလုပ်ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသောကြောင့်၊ စစ်ဆေးမှု ရလဒ်အဖြေကိုသာ နားစွန့်ပြီး ဘာကြောင့် လုပ်တာလဲနဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တရပ်လား ဟု စိတ်ဝင်စား သိချင်လှ၏။
သို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့လက်ရှိအရေးဟာ မြင်တွေ့နေရသည့်အတိုင်း အခြားနိုင်ငံများ ကပါ ကမ္ဘာနဲ့ US နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး တရုတ်ဘေးအန္တရာယ်မှနေ လွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ တရုတ်ကို အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသလို စစ်ရေးအရ အရေးယူခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း တောင်ပယ်လယ် ကျွန်းတွေ ကို တိုက်ခိုက် နစ်မြုတ် ရှင်းပစ်ပြီး
US ထရန့်မှ တရုတ်ပြည်တွင်း အခြေနေကို ပြို လဲအောင် ဖန်တီးပြီး၊ ခေါင်းဆောင်တွေကို လက်နက်နဲ့မသတ်ပဲ၊ နိုင်ငံသားတွေကို မထိခိုက်စေဘဲ၊ ဗိုင်းရပ်အစလှန်ပြီး ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ပြည်သူတွေ ဆန့်ကျင်အောင် လုပ်ပြီး၊ ထိုစနစ်ကို အမြစ်ဖြတ်မှာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဖြတ်ပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို အသက်သွင်း‌ပေးလိမ့်မည်ဟု၊
ဒါမှ ကမ္ဘာနဲ့ US ဟာ အာဏာ ရှင်များ အရေးမှနေ စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပြီး၊ မဟုတ်လျင်တော့မူ ထိုသို့နိုင်ငံများအား အချိန်ကုန် ငွေကုန် လူပန်းနဲ့ စစ်ရေးအရ အရေးယူပြီး၊ ထိုနိုင်ငံပြည်သူ ထိခိုက်နစ်နာ မုန်းတီးေ စမည့် လုပ်ရပ်မျိုး ကျုးကျော်မှုများနှင့် လုပ်ခဲ့လျင်၊ အီရက်လို ဖြစ်သွားနိုင်ပြ်ီး ရေရှည်နဲ့ မငြိမ်းချမ်းသော ပွဲမပြီးသော ပြည်သူက ပြန်ဆန့်ကျင်သော အနေထားမှာ ရှေ့တိုး မရ နောက်ဆုတ် မရနဲ့ ထိုနိုင်ငံတွေကို ဒီမိုကရေစီ အသက်မသွင်းနိုင်ပဲ ကိုယ်ရှုးကိုယ်ပတ် ဖြစ်မှာစိုးသောကြောင့်၊
ထရန့်သည် ယခုလို ဝိုင်းပိတ်ဆို့ အချိန်ယူထားပြီး တရုတ်ပြိုအလဲ သူ့ပြည်သူမှ အစိုးရအား ပြန်ဆန့်ကျင်ပြီး အာဏာရှင် အစိုးရအား ဖြုတ်ချ ဆန္ဒပြုချိန်မှာစစ်ရေးအရ ၀င်ခဲ့ရင်လည်း ရေကန်အသင့် ကြာအသ င့်ပါပဲဟု၊
မ ဟုတ် လျင် စစ်ရေးအရ အနိုင်ရ ရှိ မှာ ဖြစ်သော် လည်း လူဦးရေများလွန်းသော၊ ထို လူဦးရေအား အသုံးချပြီး လှိုင်းလုံးစစ်ဆင်ရေးနဲ့ ထိုးချ ကစားလာမည့် တရုတ် အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကွက် ကို ကြိုမြင်သိထား၍ ထရန့်မှ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြမ်းပြန်ကြော်ဖို့ အချိန်စောင့် ငါးမျှားနေသလို၊ တရုတ်မှလည်း မည်သို့ ထွက်ပေါက်ရှာမည်ဆိုတာ၊ ရုရှားမှ မည်သည့် ဘက် ပါပြီး နောက်ကျော ဓားထိုးမည်ဆိုတာ ခုမှ ပွဲက စိတ်ဝင်စားဖွယ် အမြင့်ဆုံးတန်ပို အနေထားသို့ ရောက်ရှိလာနေ၍
အမေရိကန် နဲ့ ရုရှား အတွက် တန်ပြန်ထောက်လှန်းနိုင်ရန် နည်းပညာ ဂြိုလ်တု လွှင့်တင်တာတောင် မှ မျက်နှာမသာမယာ နဲ့ စိတ်ကျ ပင်ပန်းနေသော ရှီအဖို့ သူ့အတွက် ထွက်ပေါက်ပိတ်မိနေသလို၊ သူ၏ အမှားများကို ဆက်လျက်ကိုင်ဆွဲနေပါက၊
ကဒါဖီတို့ လမ်းစဉ်သာ ရှိတော့ကြောင်းနဲ့ ခုချိန် အရှုံးပေးဟန် All B စနစ်ဆိုသည်မှာလည်း မည်သူမျှ အယုံကြည် မရှိတော့၍ ထွက်ပေါက်အတွက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပြနေသလို
ယခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ၊ ကိုဗစ်ဆေး ရခါနီးပြီ ထုတ်နိုင်တော့မည် ဆိုတဲ့ အနေထား ဖြစ်နေချိန်မှာ ၊ ရောဂါပိုးတွေ ပြန်ကူးပြန်တွေ့နေပြီ ဆိုတာကလည်း သံသယဖြစ်ဖွယ် ဖြစ်နေပြီး ၊ ထိုအချိန် ထရန့်က သူဆေး ရရင် အားလုံးကို တကမ္ဘာလုံးကို ဖြန့်ဝေပေး မယ် ကြေငြာလိုက်မှု နဲ့ ရောဂါ ကူးစပ်မြင့်တက်နေပုံအရ ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ လူနေမှု စနစ်ကြောင့် ဆိုသော်ငြား ..
ဆေးထုတ်တော့ မှာမို့ ဆေးရောင်းမှုဈေးကွက် မြင့်တက် ‌အောင် ကူးစပ်မှုနှုန်း ပြန်တင်နေတာလား ဆိုတာနဲ့ – တရုတ်ကို ဝိုင်းပိတ်စို့ထားလို့ ထိုအရေးမှနေ လွတ်မြောက်အောင် – နိုင်ငံတိုင်းရှိ တရုတ်စပိုင် သူလျိုများမှ ရောဂါ ပိုး ကူးဆက်နှုန်း ပြန်ဖြစ် မြင့်တက်‌အောင် လုပ်ဆောင် ပြီး သူ့နိုင်ငံအတွက် ချေပ attack လုပ်နေသလား ဆိုတာ ခန့်မှန်း အဖြေထုတ် ‌နေမိပါ တယ်။
သို့ကြောင့် ထရန့် မှ သူဆေးရရင် အားလုံး ကို ဖြန့်ပေးမည် ပြောနေသလား ။
ဘာ ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအခြေနေမှာေ တာ့ အမှားပြုလုပ်သူ တရုတ် ဟာ မည်သို့မျှ ရှောင်လွဲ လို့ မရတော့ဘူးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လာမည့် ၂၁ရာစု အလွန်ဟာ အာဏာရှင်တို့ ဆိတ်သူန်းမည့် ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို ပိုင်ဆိုင် ရေးထိုးရတော့မည်လားဟု မျှော်မှန်းကြည့်ရင်း
သိူ့ကြောင့်.. UWSA ၀ တို့ဟာ အခြေခံဥပဒေ စာအုပ်ကြီးပြပြီး ကြွေးကြော် ထားမှုဟာ အလကားမ ဟုတ်ဘူးဟု။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတော့ တရုတ်အာဏာရှင်တွေနဲ့
ဒ်ီက စစ် အာဏာရှင်တွေ ပျက်သုန်းပြီး ၀နယ်အတွင်း ထွက်ပြေး ခိုအောင်းခဲ့လျင်၊ ၀ တွေဟာ သူတို့ နယ်မြေကို အာဏာမလုယူနိုင်စေရေးအတွက်၊ ခုကတည်းက ကမ္ဘာသိကြေငြာ ထုတ်ပြပြီး၊ ဒီမြေဟာ ငါတို့မြေ တို့ဘိုးဖွား တို့မြေအဖြစ်၊ အသိမှတ်ပြု ရှောင်လွှဲရန် ကြို တင် လုပ်ဆောင်ထားခြင်းသာ ဖြစ်မည် ဟု တွေးဆမိရင်း။
လာမည့် ကမ္ဘာ့အရေး မြန်မာ့အရေးဟာ အာဏာရှင် တို့ ထွက်ပေါက် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သ‌‌ ‌ဗ္ဗေသတ္တာ ကံမသကာ ကိုယ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ် ကိုယ်ခံကြပါဟုသာ ..
အဖြေ ရလဒ် ကို တကမ္ဘာလုံး မှ စောင့်မျှော် နားစွန့်နေကြ ပါကြောင်း အသိပေးရင်း ။
source by nay ye’ နှင့် ကိုးကားမှုများ ပါဝင် ပါသည် ။ Ohmar Dandy comment မင်းကြည်ညိုနေ Fri _ July 31 _ 0020.
သို့ အတှကျ .. တရုတျဟာ US နဲ့ အရေးအတှကျ အရှဘေ့ကျခွမျး မှာ လှုပျရှားမှုဖွငျ့၊ ကမ်ဘာက စောငျ့ကွညျ့ေ နတဲ့ အတှကျ MA နဲ့ ပျေါတငျ ညှိမရပမေယျ့ ၊ သူ့မှေးစားသား လကျနကျကိုငျတှနေဲ့ ရှိသမြှ အငျအား ကို စုစညျးထားစပွေီး ဝကို ပှဲ ထုတျလာတယျ ။
ထို့အတူ အီရနျနဲ့ လညျး မိတျဖကျထားပွီး၊ ရုရှားနဲ့ လညျး ပေါငျးစညျး ထားတယျ ။ သို့သျော ဒီအခွနေတှေကေို မွငျသလောကျ တူးဆှကွညျ့ရရငျ ..
တရုတျ ဟာ သူနဲ့ အနီးဆုံး ဒီအရှဘေ့ကျ အခွမျး မှာ စဈရေး အတှကျ မှေးစားသား လကျနကျကိုငျတှကေို စုစညျးထားပွီး၊ ထိုအထဲကမှ အငျအားတောငျ့တငျးဆုံး ဝကို ပှဲထုတျပွီး မွနျမာကို ဖွဲခွောကျလနျ့ ဟနျ့ ထား တယျ ။ ဒါဟာ စဈရေးအရ ကွိုတငျ ပွငျဆငျထားခွငျး သဏ်ဍနျပေါ့။
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ သူတျို့လို ပါခြီပါခပျြ အနထေားလေးတှေ နဲ့ တရုတျ အားကိုးပွီး စဈရေးထပွမရ ၊ နှောငျ့ပွမ ရ၊ လကေ့ငျြ့ပွမရ ၊ လကေယျြ မရနဲ့ ဆိုတော့ မီဒျီယာနဲ့ ဟနျရေးလောကျ သာပွပျီး၊ လူလုံးထှကျပွပွီး ၊ နိုငျငံရေးအရ ကနျ့လနျ့ တိုကျ ဟနျ့ပွခွငျး သာ ရတဲ့ အတှကျ ၊ ဒါဟာ သူ တို့ စဈရေး ပွခွငျး၊ ခွိမျး‌ခွောကျခွငျးပဲပေါ့ မဟုတျလား။
US က တရုတျဘကျ ကို မပါစရေနျ အစ်စရေး နဲ့ ထိနျးထား ခိုငျးပွီး ၊ ရနေံ သဘျော၊ ကား ၊ ပိုကျလိုငျး စသညျ့ တို့အား ဖကျြစီး ဖောကျခှဲ မီးရှို့ ထားပွီး ၊ တရုတျကို ရနေံဖွတျတောကျဖို့နဲ့ အီရနျကို အေးဆေးနေ ဖို့ သတိပေးထားပေ မယျ့ ၊
ယခုအခါ စဈရေးလကေ့ငျြ့နတေယျ ဆိုတာ တရုတျဘကျ ကို ပါဖို့လား ၊ ပါဖို့ထကျ သူ့ဂုဏျ သိက်ခာကို ပွနျတငျပွီး ပါဝါ တငျပွနခွေငျး သာ ဖွဈသညျ ဟု တှေးဆ မိသညျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ ဆိုသျော သူသာ တကယျ လုပျမညျ ဆို သူ့ကို နှိပျသှားသော အစ်စရေး ကို ပွနျစျောပွရမညျ မဟုတျလား ။ သို့ပမေယျ့ တရုတျအခကျြပွမှုနဲ့ US စတငျမှုကိုလညျး စောငျ့နဖှေယျရှိပွီး ပွနျမတုံ့ပွနျတာလညျး ဖွဈမညျ။
ဒျီ အတှကျ US ရနျမှနေ ကွိုတငျကာကှယျပွီး ပွနျလညျ တုံ့ပွနျရနျအတှကျ စဈရေးကွိုတငျ ပွငျဆငျနတောလညျး ဖွဈနိုငျသညျ။ သို့ပမေယျ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ယခုလို အမရေိကနျလယေဉျတငျသဘျောပုံ စံနဲ့ အခွစေိုကျ စခနျးနား အထိ ဒုံးကညျြမြား ပဈလှတျပွီး
စဈရေးလကေ့ငျြ့တယျ ဆိုတော့၊ US နဲ့ တရုတျ စဈဖွဈ လငျြ အီရနျ ပါလာနိုငျ ဖှယျ ရှိသညျ ဟု ယူဆရပွီး၊ အစ်စရေးကို မတုံ့ပွနျ တာက တရုတျက အခကျြမပွသေးလို့ ဖွဈပွီး၊
သူ သာ ပွနျတုံ့ပွနျရငျ ပှဲက စပွီး တရုတျ ပါဝငျလာ ရတော့ မှာ ဖွဈသောကွော ငျ့၊ ထို့အပွငျ US နဲ့လညျး ပှဲက စပွီဖွဈသောကွောငျ့၊ ယခုအခါ ဟနျကို မာနျ့ဖို့ဘို့အတှကျနဲ့ ဂုဏျသိက်ခာအတှကျ၊ စဈရေးပွနပွေီး ပွနျလညျ ဖွဲခွောကျပွနခွေငျးသာ ဖွဈ သညျ ဟု မှတျယူ မွငျမိသညျ။
ပွောရရငျ အရှကျခှဲခံထားရမှု ကို အရှကျပွေ ပွနျလုပျပွနခွေငျးပဲ ဟု မွငျမိပမေယျ့ US ကို အခဲမကမြှေုကွောငျ့ သတိတော့ ထားရပါလိမျ့မညျဟု။
ဒီပှဲမှာ ရုရှား ဟာ အထူး အရေးကွီးပွီး ကွောကျစရာကောငျးသော ဖကျြမွငျး အဖွဈ ရှိနသေညျကို အထူးသတိထား ရမညျ ဖွဈသညျ။ ပွောရရငျ ရုရှား ပူတငျသညျ ငှရေရငျ ဘာမဆို လုပျမညျ့ လူစားလညျး ဖွစသညျ။
သူသညျ အလယျဒိုငျ ခှခကျြ ဝှတျဖဲ နဲ့ ခနျ့မှနျး ရခကျသူ ခွံခှ လူလညျဖွဈ၍၊ အငျမတနျမှ ကွောကျစရာကောငျးသော သှေးအေး ဉာဏျကွီးရှငျဖွဈ၍ စဈပှဲရဲ့ အခွပွေုမှုကို စောငျ့ကွညျ့ကစားပွီး ပှဲရလဒျအဖွကေို ဆုံးဖွတျပေး မညျ့ ဒိုငျ သို့ အထိုငျ ဆိုလညျး မမှားပေ။
အဘယျ့ကွောငျ့ ဆိုသျော .. အိန်ဒိ ကို လကျနကျရောငျးပွီး၊ တရုတျကို ပူးပေါငျးကာ ကမ်ဘာ့အရေးမှာ ရပျတညျမညျဟု ကွငွောပွီး၊ စဈရေးပွငျဆငျနမှေုကလညျး သူ့အတှကျလား၊ တရုတျအတှကျလား သို့ တဖကျလှညျ့ နဲ့ ပူတငျကွီး ဘာတှလေုပျ ဖို့ ဟနျရေးပွနသေလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးသလို၊
တရုတျကို S400 တှေ မရောငျးဘူး ကွငွောလိုကျတယျ ဆိုတာကလညျး ပူတငျကွီး ရဲ့ တမငျ မကျြလှညျ့ ပွကှကျတှသော လှညျ့စားမှုတှသော ဖွဈတယျဟု မှတျယူပါတယျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော အိန်ဒိယကို လကျနကျ ရောငျးပွီး တရုတျအား ရောငျးမညျ ဆိုပါက ရနျတိုကျပေးရာ ကပြွီး စဈပှဲကို ကွားကနေ ဖနျတီးနတေဲ့ သူဟာ ပူတငျပါလို့ မွငျလာနိုငျတဲ့အတှကျ၊ ထို့မပွငျ လကျနကျရောငျးပွီး ရောငျးရဖို့ အတှကျ
နိုငျငံခွငျး ခှပျခိုငျးပွီး ကွားမှနေ အမွတျထုတျယူသူဟာ ရုရှားဟု စှတျစှဲလာနိုငျသညျ့အပွငျ၊ စဈပှဲကို စတငျဖို့ ဖနျတီးပေးရာကသြောကွောငျ့ ပူတငျက ပါးနပျစှာဖွငျ့ မရောငျးဟု ကွငွော အသိပေးပွီး
၊ ဒီစဈပှဲ မှာ သူမ ပါဟု ရှောငျလှဲသဏ်ဍနျပွကာ တရုတျနဲ့ မိတျဖတျလိုမှုကို မခှာလိုကွောငျး၊ အရိပျမှတျပါ ပွသွပျီး စဈရေး လကေ့ငျြ့နသေညျဆိုသညျမှာ ပူတငျသညျ ခနျ့မှနျ့ရခကျသော လူလညျ ပကျကား တဈယောကျ ဆိုတာထကျ ကွောကျစရာကောငျးသော ဖကျြမွငျးတဈကောငျ ဆိုတာ တှမွေ့ငျနိုငျလသေညျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ထိုလကျနကျတှေ ကို တရုတျအား မရောငျးဘူး ဆိုပမေယျ့ နယျမွခွေငျးထိစပျနတေဲ့ ပူတငျအဖို့ အခြိနျမရှေး တရုတျပွညျတှငျးသို့ သယျယူ ပို့ပေးနိုငျလသေောကွောငျ့ ဖွဈသညျ ။
ဒီ့အတှကျ သနျးရှတေို့တောငျ သူတို့လကျထကျခတျေက တရုတျ နဲ့ ရုရှားက လကျနကျတှေ ကို သီလဝါကနေ တဆငျ့ သံလငျြ ပါရီလမျးတလြောကျကနေ မဂျလာဒုံကို ညည ကားကွီးတှေ နဲ့ နစေ့ဉျ တောကျလြောကျ လပေါငျးမြားစှာ သယျယူပို့ဆောငျနေ တာ လုပျခဲ့ ရငျ ဒီကစျေ့ဟာ တရုတျ ရုရှား အတှကျ အသေးဖှဲပါပဲ။
ဒါကို နာမညျ ကောငျးယူပွ လှညျ့စားပွဖို့အတှကျ ကမ်ဘာကို ရုပျရှငျရိုကျပွနပွေီး ရုရှားဟာ တရုတျကို S400 တှေ မရောငျးဘူး ကွငွောပွောနတောဟာ လူရီစရာ လှညျ့ကှကျဖွဈသလို
ဝယျလညျး အမရေိကနျရဲ့ 35 တှကေို မဟနျ့ တားနိုငျလို့ ဂငျြးလကျနကျတှကေို ငှကေုနျခံပွီး မဝယျဘူးဆိုတာ၊ သို့ပမေယျ့ ရနေံပှဲစားခအဖွဈတော့ တရုတျကွီးကို အပေးယူ လုပျနိုငျတယျဆိုတာ မယုံကွညျရသော အာဏာရှငျနှဈကောငျ လှညျ့ကှကျ အဖွဈ ရှု့မွငျပွီး
ရုရှားဟာ စဈ မှာ ပါမလား မညျသူ့ ဘကျပါ မလဲ ဆိုတာ နဲ့ မညျသူတှကေို လကျနကျရောငျးပွီး ဒိုငျအဖွဈ စားမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားဖှယျ စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာ ကောငျးလှပါသညျ။
ခှေးလေးခုနျ လို့ ဖုနျမထပါဘူး ဆိုသလို ကမ်ဘာ့အရေး မှာ သူ့နာမညျကကြသြှားရငျ လူရာဝငျ ထငျပျေါခငျြလို့ ဇာတျကို တမြိုးပွီး တမြိုး ဖနျတီးကပွတတျတယျ ခုတော့ ငွိမျနသေလို ရှိပမေယျ့ ဘယျခြိနျထကွှ ဖွဲပွမလဲ မသိပမေယျ့ အငတျဘေးကနေ နညျးနညျးသကျသာ သှားလို့ ငွိမျနခွေငျးဟာ နောကျကှယျက ဘယျသူ ထောကျပံ့နသေလဲ စဉျးစားစရာပါ။ နောကျ ဂပြနျက စဈရေးအရ ထကွှပလာတော့ ဝပျဆငျးသှားပွီး အရငျလို ဇောငျးမကွှရဲတာလဲ ပါလိမျ့မယျ။
သို့သျော သူ့ကိုတော့ လြော့တှကျမရပဲ တရုတျဝှတျဖဲအဖွဈ ဘယျခြိနျ ဘာလုပျ လမျးကွောငျး အာရုံလှဲမလဲ မကျြခွမေပကျြ စောငျ့ကွညျ့ရငျး၊ သခြောတာကတော့ ဂပြနျကို အရငျလို သှားမစ မဖွဲရဲတော့ပါဘူးဟု။
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ဂပြနျက .. US လို အကြိုးမွတျအတှကျနဲ့ တောငျကိုရီးယားအတှကျ ကာဗာလုပျနရေလို့ မွောကျကို ခြော့ထိနျးနပေမေယျ့၊ ဂပြနျက ငယျနိုငျတှကေို ဘာမကျြနှာမှ ထောကျစရာ မလိုတဲ့အတှကျ ဒီတခါ သူ့လာစရငျ ပွနျဝုနျးပွလိမျ့မယျဟု ယူဆမိပွီး၊ အနညျးဆုံး ဟိုကျပါဆိုးနဈတှေ ပဈပဈပွပွီး ပွနျဖွဲပွတော့မှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ၊
တရုတျနဲ့ မွောကျပု အနိုငျကငျြ့မှုမှေ န လှတျမွောကျအောငျ အတှကျ ခုကတညျးက စဈရေးကို ပွငျဆငျလာနပွေီ ဖွဈတဲ့အတှကျ၊ မွောကျပုဟာ မကွာခငျ ကမ်ဘာ့ဇာတျခုံပျေါက ခြုပျငွိမျးသှားမညျ့ နိုငျငံပါဟု မွငျနမေိပွီး၊ ယခု တရုတျနဲ့ စဈရေး မှာ ဝှတျဖဲ အဖွဈ ပါနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ ရပါလိ မျ့မယျ။
ထရနျ့ ဘာလုပျနေ သလဲ ဆို ဆေးစောငျ့နေ တယျ ရှေးကောကျပှဲ ရှပွေီ့း တရုတျပွိုလဲကတြဲ့အထိ အခြိနျဆှဲ စောငျ့နတေယျ။ ထိုအရာတှေ အခြိနျကပြွီး သူ့လကျထဲရောကျလာပွီဆို စဈပှဲကို အနညျးဆုံး တောငျပငျလယျ မှာ စလိမျ့မညျ ဟု ယူဆမိ တယျ။
အ ခုတော့ အီရနျ ရနေံလိုငျးကို ဖွတျတောကျ ဖကျြစီးထားပွီး တောငျပယျလယျနဲ့ ဘဂျလားပငျလယျအျောမှာလညျး ပိတျစို့ဝနျးရံထားသောကွောငျ့ အီရံ၏ ရနေံမြာ ရုရှားကုနျးမွမှေ တဆငျ့ တရုတျသို့ ပို့ဆောငျပွီး လုပျဆောငျနေ ရတယျ။
ဒါကွောငျ့ ထရနျ့ ဟာ ပူတငျဆီ နူးကလီးယားနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖုနျးဆကျဆှေးနှေးတယျဆိုပမေယျ့ ရနေံကိစ်စပါ ပါလိမျ့မယျ။ ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ ပူတငျက လကျနကျမရောငျးရေ သးတော့ ကွားကနေ ပှဲစားလုပျပွီး ရနေံပို့နေ တယျ အီရနျထံကနေ တရုတျ ကို ။
ဒါကွောငျ့ တရုတျကို အဖကျဖကျကနေ ဖွတျတောကျ ပိတျစို့နတေဲ့ ထရနျ့ဟာ ရုရှားကို တရုတျထံ ရနေံ မပို့ဖို့ ကွိမျးသဆေျောသွမှာပဲ။ ရနေံဖွတျမှ ထုတျကုနျလြော့မယျ ကုနျသှယျမှု ပိုကဆြငျး မယျ မဟုတျ လား ။
ဒီတော့ တရုတျ ကို ထုတျကုနျ စားနပျရိက်ခာနဲ့ အစစအရာရာ ပိတျဆို့ပွီး ပွိုလဲအောငျ ထောငျခွောကျဆငျနပွေီး သူ့ပွညျသူတှေ ပွနျပုနျကနျ ဆူပူတဲ့အထိ လုပျလိုကျရငျ တရုတျကို စဈတောငျ တိုကျစရာ မလိုဘူး ကှနျမွူနဈပါတီ နဲ့ ရှီတို့အဖှဲ့ပွုတျကပြွီး စဈရှုံး အညံ့ခံ ဒူးထောကျလာမယျဆိုတာ
ထရနျ့က အကှကျခြ သခြော လုပျနပေုံပါပဲ။ ခုဆို တရုတျစား နပျရိက်ခာ ပါ ပွသနာရှိ လာတဲ့ အတှကျ အီကှဒေေါဘကျသှားပွီး ငါးတှေ ခိုဖမျးနရေတယျ။ တောငျပငျလယျကို ခမြေခရြဲဘူး။ ဒါ့အပွငျ မွနျမာပွညျ ပဲခူးနယျက ဝကျ‌တှဝေယျပွီး ကွယျခေါငျကနေ ပို့တယျကွားတယျ ။
သူတို့ဆီက ဝကျတှေ က ASF ဖွဈပွီး သကေုနျလို့။ အဲ့ဒီ ASF တှကေ လေးနှဈအထိ ပိုးမသပေဲ ပွနျမှေး ပွနျရှငျတယျဆိုတော့ ပိုးကူးဝကျ‌တှကေို အကုနျရှငျးထုတျနတောနဲ့ အကောငျရနေညျး ရိက်ခာပွတျလကျမှု နဲ့ ကွုံနရေပွီဆိုတော့၊ ခု ပဲအိတျတှကေို ရတေမံပိတျဖို့ လုပျတယျဆိုတာ ထိုပဲတှကေ တိရိစ်ဆာနျအစာအဖွဈ အသုံးပွုတယျ သိရပွီး၊ ရကွေီး မိုးရှာ မှိုတကျကုနျလို့ အဲလို့ လုပျ တယျ ခနျ့မှနျး မိတယျ။ အလကားနတေော့ အဲ့လို သုံးဖွုနျးမယျ မထငျမိဘူး။ ဒီတော့ တရုတျတို့
ရဘေေး – အလုပျ လကျမဲ့ – စီးပှား ထုတျကုနျ ပိတျထားမှု – ရငျးနှီး မွုပျနှံမှု မရှိမှု – ရနေံဖွတျထားမှု – သှငျးကုနျ ထုတျကုနျ နဲ့ စားနပျရိက်ခာ ဖွတျထားမှု – တောငျပငျလယျ နဲ့ ဘဂျလား အား ပိတျဆို့ထားမှု – ငှကွေေး ရိက်ခာ နညျးလာမှု – ကမ်ဘာမှ အရေးယူပိတျစို့ထားမှု
စသညျ့ ပွဈမှုပေါငျးမြားစှာ နဲ့ ဘေးကွပျနံကွပျ တငျမက ထှကျပေါကျ အရပါ မရှိတော့သော တရုတျအဖို့ ယခုလို ကမ်ဘာက ဝိုငျးညှပျပိတျဆို့ ထားခြိနျမှာ တရုတျဘာကွောငျ့ မတုနျ့ပွနျပဲ ငွိမျနွပျေီး ထှကျပေါကျရှာဖို့ အခြိနျယူနသေလဲ ဆို
ဒျီအခွနေကေို ကွိုတငျ တှကျဆမိ လို့ သူ့နိုငျငံ ကိုဗဈအပွီးကာလမှာ အီကနျကနေ အောကျဈေးနဲ့ တဈနကေ့ားအစီး ၁၇၀ ကြျောနဲ့ သယျယူဏယျထားတဲ့ ရနေံဟာ နောကျထပျ နှဈလလောကျအထိ တောငျ့ခံ နိုငျအုံးမှာ ဖွဈလို့ပဲဖွဈတယျ။ ဒီတော့ ကွားထဲက ရနေံပှဲစားလုပျ အမွတျထုတျနတေဲ့ ပူတငျဆီ ထရနျ့ဖုနျးဆကျ ဟနျ့တားပွောရတာ မဆနျးပါဘူး။
ဒါ့ အပွငျ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ နဲ့ US ကာခြုပျ ‌‌တှဆေုံ့မှု၊
ထိုငျးနိုငျငံ ဆိုငျရာ အမရေိကနျ သံအမတျ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ ကို သှားရောကျလလေ့ာမှုတှေ အရ၊ နောကျ ‌တောငျတရုတျပငျလယျ၊ ဘင်ျဂလားပငျလယျတှမှော USတို့ ပိတျဆိုထားမှုကွောငျ့၊ မူးယဈနဲ့လကျနကျမှောငျခိုလမျးကွောငျး‌တှေ ပွတျတောကျပွီး၊ သာကော တို့ အရငျလို ဗိုကျ မဖေါငျးတော့ဘူး ။ နောကျ ပွညျတှငျးမှာ မူးယဈဖမျးဆီးရမိမှုကလဲ ယခငျထကျ နညျးသှားတယျ ( မွနျမာပွညျက ‌ဆေးပွားဖမျးတာမြိုးကို မဆိုလိုပါ။ထိနျးခြုပျဓါတုနဲ့ ဆပျစပျပစ်စညျး အမြားအပွား ဖမျးတာမြိုး ဆိုလိုခွငျးဖွဈ )
ဘာကွောငျ့ဆိုတော့ .. မွနျမာ မှာ ကုနျကွမျး နဲ့ ထိနျးခြုပျ ဓါတု ပစ်စညျး မထှကျ ရှိတာသိတဲ့ USက၊ တရုတျနဲ့တရုတျမယားပါသားမြားလုပျကိုငျနတေဲ့လမျးကွောငျးကို၊ မွနျမာပွညျအပွငျဘကျ ထိုငျးနယျစပျကနပေိတျဆို့တော့မဲ့အခွအေနလေို့သုံးသပျလို့ ရတယျ ။ ဒီ့အတှကျ မွနျမာပွညျတှငျးကို x-ray စကျပေးလိုကျပွီး ပွညျထောငျစုလမျးမပျေါ စဈဆေးလိုကျတဲ့ခါ
မူးယဈ လကျနကျနဲ့ အဆီအဈနတေဲ့ တရုတျမှေးစားသားအရိုးကိုကျ တဈစု အထိနာပွီး x-ray စကျကို လာပဈခတျ ဖကျြဆီးပွီး အစိုးရကို တရုတျအလိုကြ ဆနျ့ကငျြပွတဲ့ အခွနေတေ ဈခုထိ ဖွဈခဲ့ တယျ မဟုတျလား။ နောကျ ‌ကြောကျမဲ နောငျခြိုနယျထဲ အထိထိုးဖေါကျလာပွီး၊ ရှော့တိုကျဒုံးနဲ့ အာရုံလှဲ မကျြလှညျ့ပွကှကျလုပျသှားသေးတယျ။
အခုလဲ ထိုငျးနယျစပျ မှာ တရုတျ ရဲ့ ဘဏ်ဍာ ကို ‌အောကျလမျးနညျးနဲ့ဖွညျ့နတေဲ့ လမျးကွောငျးကို US ထိနျးခြုပျတော့မယျ။ ဟိုယခငျ KNU အငျအားတောငျ့တငျးစဉျကာလတုနျးက ထိုငျးနဲ့အမရေိကနျဟာ ထိုငျးမွနျမာနယျစပျ မှာ မွှဟေောကျစဈဆငျရေးနဲ့စဈရေးပူးတှဲလကေ့ငျြ့ခဲ့ဘူးလို့ ဒီနယျမွဟော US နားရှကျရာတှခေညျြးဘဲဆိုတာ တရုတျ သတိပွုရတော့ မယျ။
အခုလညျး ထိုငျး အမရေိကနျပူးတှဲစဈရေးလကေ့ငျြ့မလား။ထိုငျးဘကျခွမျး စဈဆေးရေးဂိတျတှမှောအဆငျ့မွငျ့x-rayစကျတှတေတျဆငျပေးမလား တဈခုခုဘဲ။ အဲ့ဒီကစားကှကျနဲ့ အညီ အမရေိကနျကမူးယဈတေးနဲ့ ပတျသကျ တဲ့ မွနျမာတိုငျးရငျးသားခေါငျးဆောငျတှကေို black list သှငျးပွီး ခှနျဆာကိုဖမျးဝရမျးထုတျသလို လုပျခဲ့ရငျ မှေးစားသားမြားခှနျဆာလို အယောငျပွ အစိုးရထံ လကျနကျအပျပါလိမျ့မယျ။
သို့ပမေဲ့ ယခငျအစိုးရက ခှနျဆာကို လကျခံပွီး အမရေိကနျ ကို မသိကြိုး ကြှံပွုခဲ့ပမေဲ့ ။ ယခု အစိုးရက သူ့သိက်ခာအကခြံပွီး USထံ မလှဲပေးဘဲ အကာအကှယျပေးလိမျ့မယျမထငျဘူး။ တဖွေးဖွေး လူဆိုဖမျးပှဲကရုပျလုံးပျေါလာလိမျ့မယျ ဆိုတာ သိစခြေ ငျတယျ ။
ဒါ့အပွငျ အနောကျ နဲ့ အမရေိကနျမှာ စာအိတျထဲ သီးနှံမြိုးစတှေ့ေ ထညျ့ပွီး ပေးပို့ လုပျဆောငျထားမှုဆိုတာကလညျး စားနပျရိက်ခာအတှကျနဲ့ ဖွတျတောကျဖို့နဲ့၊ ဓာတုအဆိပျသငျ့ဖို့၊ ဖကျြပိုး မြားနှောငျ့ပွီး တိုငျးပွညျ၏ ရိက်ခာအတှကျ ဖွတျတောကျ ဒုက်ခရောကျစဖေို့ လုပျကွံမှု တိုကျခိုကျမှုဟုသာ ထငျမိပွီး၊ စာအိတျထဲမှာ ဒေါငျ့သနျးရောဂါပိုးမှားမြား နဲ့ ဓာတုအ ဆိပျသငျ့ လကျနကျမြား ထညျ့ထားပွီး တိုကျခိုကျမှု ဖွဈစဉျတှကေို ပွနျလညျ မွငျမိ အောကျမစေ့ပေါသညျ။
သို့အတှကျ ထိုအရာမြား ကို အသုံးမပွုကွရနျ သကျဆိုငျရာ နိုငျငံမြားမှ ဆျောဩထားသလို၊ ထို လုပျရပျအား တရုတျမှ သူမလုပျကွောငျးလညျး ပွောဆိုထားသောကွောငျ့၊ စဈဆေးမှု ရလဒျအဖွကေိုသာ နားစှနျ့ပွီး ဘာကွောငျ့ လုပျတာလဲနဲ့ တိုကျခိုကျမှု တရပျလား ဟု စိတျဝငျစား သိခငျြလှ၏။
သို့ကွောငျ့ ကမ်ဘာ့လကျရှိအရေးဟာ မွငျတှနေ့ရေသညျ့အတိုငျး အခွားနိုငျငံမြား ကပါ ကမ်ဘာနဲ့ US နဲ့ ပူးပေါငျးပွီး တရုတျဘေးအန်တရာယျမှနေ လှတျမွောကျဖို့နဲ့ တရုတျကို အရေးယူဆောငျရှကျနိုငျဖို့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနသေလို စဈရေးအရ အရေးယူခဲ့မယျ ဆိုရငျလညျး တောငျပယျလယျ ကြှနျးတှေ ကို တိုကျခိုကျ နဈမွုတျ ရှငျးပဈပွီး
US ထရနျ့မှ တရုတျပွညျတှငျး အခွနေကေို ပွို လဲအောငျ ဖနျတီးပွီး၊ ခေါငျးဆောငျတှကေို လကျနကျနဲ့မသတျပဲ၊ နိုငျငံသားတှကေို မထိခိုကျစဘေဲ၊ ဗိုငျးရပျအစလှနျပွီး ကှနျမွူနဈပါတီကို ပွညျသူတှေ ဆနျ့ကငျြအောငျ လုပျပွီး၊ ထိုစနဈကို အမွဈဖွတျမှာဖွဈသောကွောငျ့၊ ဖွတျပွီး ဒီမိုကရစေီစနဈကို အသကျသှငျး‌ပေးလိမျ့မညျဟု၊
ဒါမှ ကမ်ဘာနဲ့ US ဟာ အာဏာ ရှငျမြား အရေးမှနေ စိတျအေးရမှာဖွဈပွီး၊ မဟုတျလငျြတော့မူ ထိုသို့နိုငျငံမြားအား အခြိနျကုနျ ငှကေုနျ လူပနျးနဲ့ စဈရေးအရ အရေးယူပွီး၊ ထိုနိုငျငံပွညျသူ ထိခိုကျနဈနာ မုနျးတီးေ စမညျ့ လုပျရပျမြိုး ကြုးကြျောမှုမြားနှငျ့ လုပျခဲ့လငျြ၊ အီရကျလို ဖွဈသှားနိုငျွပျီး ရရှေညျနဲ့ မငွိမျးခမျြးသော ပှဲမပွီးသော ပွညျသူက ပွနျဆနျ့ကငျြသော အနထေားမှာ ရှတေို့း မရ နောကျဆုတျ မရနဲ့ ထိုနိုငျငံတှကေို ဒီမိုကရစေီ အသကျမသှငျးနိုငျပဲ ကိုယျရှုးကိုယျပတျ ဖွဈမှာစိုးသောကွောငျ့၊
ထရနျ့သညျ ယခုလို ဝိုငျးပိတျဆို့ အခြိနျယူထားပွီး တရုတျပွိုအလဲ သူ့ပွညျသူမှ အစိုးရအား ပွနျဆနျ့ကငျြပွီး အာဏာရှငျ အစိုးရအား ဖွုတျခြ ဆန်ဒပွုခြိနျမှာစဈရေးအရ ဝငျခဲ့ရငျလညျး ရကေနျအသငျ့ ကွာအသ ငျ့ပါပဲဟု၊
မ ဟုတျ လငျြ စဈရေးအရ အနိုငျရ ရှိ မှာ ဖွဈသျော လညျး လူဦးရမြေားလှနျးသော၊ ထို လူဦးရအေား အသုံးခပြွီး လှိုငျးလုံးစဈဆငျရေးနဲ့ ထိုးခြ ကစားလာမညျ့ တရုတျ အာဏာရှငျတှရေဲ့ အကှကျ ကို ကွိုမွငျသိထား၍ ထရနျ့မှ ငါးကွငျးဆီနဲ့ ငါးကွမျးပွနျကွျောဖို့ အခြိနျစောငျ့ ငါးမြှားနသေလို၊ တရုတျမှလညျး မညျသို့ ထှကျပေါကျရှာမညျဆိုတာ၊ ရုရှားမှ မညျသညျ့ ဘကျ ပါပွီး နောကျကြော ဓားထိုးမညျဆိုတာ ခုမှ ပှဲက စိတျဝငျစားဖှယျ အမွငျ့ဆုံးတနျပို အနထေားသို့ ရောကျရှိလာနေ၍
အမရေိကနျ နဲ့ ရုရှား အတှကျ တနျပွနျထောကျလှနျးနိုငျရနျ နညျးပညာ ဂွိုလျတု လှငျ့တငျတာတောငျ မှ မကျြနှာမသာမယာ နဲ့ စိတျကြ ပငျပနျးနသေော ရှီအဖို့ သူ့အတှကျ ထှကျပေါကျပိတျမိနသေလို၊ သူ၏ အမှားမြားကို ဆကျလကျြကိုငျဆှဲနပေါက၊
ကဒါဖီတို့ လမျးစဉျသာ ရှိတော့ကွောငျးနဲ့ ခုခြိနျ အရှုံးပေးဟနျ All B စနဈဆိုသညျမှာလညျး မညျသူမြှ အယုံကွညျ မရှိတော့၍ ထှကျပေါကျအတှကျ စဈရေးလကေ့ငျြ့ပွနသေလို
ယခု ကမ်ဘာ့နိုငျငံ အသီးသီးမှာ၊ ကိုဗဈဆေး ရခါနီးပွီ ထုတျနိုငျတော့မညျ ဆိုတဲ့ အနထေား ဖွဈနခြေိနျမှာ ၊ ရောဂါပိုးတှေ ပွနျကူးပွနျတှနေ့ပွေီ ဆိုတာကလညျး သံသယဖွဈဖှယျ ဖွဈနပွေီး ၊ ထိုအခြိနျ ထရနျ့က သူဆေး ရရငျ အားလုံးကို တကမ်ဘာလုံးကို ဖွနျ့ဝပေေး မယျ ကွငွောလိုကျမှု နဲ့ ရောဂါ ကူးစပျမွငျ့တကျနပေုံအရ ဒုတိယလှိုငျးနဲ့ လူနမှေု စနဈကွောငျ့ ဆိုသျောငွား ..
ဆေးထုတျတော့ မှာမို့ ဆေးရောငျးမှုဈေးကှကျ မွငျ့တကျ ‌အောငျ ကူးစပျမှုနှုနျး ပွနျတငျနတောလား ဆိုတာနဲ့ – တရုတျကို ဝိုငျးပိတျစို့ထားလို့ ထိုအရေးမှနေ လှတျမွောကျအောငျ – နိုငျငံတိုငျးရှိ တရုတျစပိုငျ သူလြိုမြားမှ ရောဂါ ပိုး ကူးဆကျနှုနျး ပွနျဖွဈ မွငျ့တကျ‌အောငျ လုပျဆောငျ ပွီး သူ့နိုငျငံအတှကျ ခပြေ attack လုပျနသေလား ဆိုတာ ခနျ့မှနျး အဖွထေုတျ ‌နမေိပါ တယျ။
သို့ကွောငျ့ ထရနျ့ မှ သူဆေးရရငျ အားလုံး ကို ဖွနျ့ပေးမညျ ပွောနသေလား ။
ဘာ ပဲဖွဈဖွဈ ဒီအခွနေမှောေ တာ့ အမှားပွုလုပျသူ တရုတျ ဟာ မညျသို့မြှ ရှောငျလှဲ လို့ မရတော့ဘူးဖွဈကွောငျးနဲ့ လာမညျ့ ၂၁ရာစု အလှနျဟာ အာဏာရှငျတို့ ဆိတျသူနျးမညျ့ ခုနှဈသက်ကရာဇျကို ပိုငျဆိုငျ ရေးထိုးရတော့မညျလားဟု မြှျောမှနျးကွညျ့ရငျး
သိူ့ကွောငျ့.. UWSA ၀ တို့ဟာ အခွခေံဥပဒေ စာအုပျကွီးပွပွီး ကွှေးကွျော ထားမှုဟာ အလကားမ ဟုတျဘူးဟု။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုတော့ တရုတျအာဏာရှငျတှနေဲ့
ဒျီက စဈ အာဏာရှငျတှေ ပကျြသုနျးပွီး ဝနယျအတှငျး ထှကျပွေး ခိုအောငျးခဲ့လငျြ၊ ၀ တှဟော သူတို့ နယျမွကေို အာဏာမလုယူနိုငျစရေေးအတှကျ၊ ခုကတညျးက ကမ်ဘာသိကွငွော ထုတျပွပွီး၊ ဒီမွဟော ငါတို့မွေ တို့ဘိုးဖှား တို့မွအေဖွဈ၊ အသိမှတျပွု ရှောငျလှဲရနျ
တရုတ် တစ်နိုင် ငံ လုံး ကို (၇၂) နာရီအတွင်း အမှုန့်ချေပစ် လို့ ရ တဲ့ အမေရိကန် ( သို့ ) မိစ္ဆာနဂါး အားပျော့ချိန်
ပလိတ်ကူးစက်မှု အတည်ပြုပြီးနောက် ခြင်မှတဆင့်ကူးစက်သော သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါသစ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း တရုတ်အစိုးရ အတည်ပြုထုတ်ပြန်
အင်ဒိုနီးရှားတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်လူနာမဟုတ်ပဲ Covid-19 ရောဂါလက္ခဏာများဖြင့် သေဆုံးသူ လူ( ၂၂၀၀ ) ကျော်ရှိလာ
တရုတ်နိုင်ငံ တွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် လူပေါင်း (၂၇၃) ဦးသေဆုံး ၊ (၈၀) ဦးပျောက်ဆုံး ၊ (၂၂၀) ဦး ဒဏ်ရာရရှိ ၊ အမြင့်ဆုံး သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထား
ထိုင်ဝမ်ကျွန်း အနီး အမေရိကန် လေယာဉ်တင် သင်္ဘော လှည့်လည် သွားနေ သည့် ဧရိယာ တွင် တရုတ် အဆင့်မြင့် လက်နက် များဖြင့် စစ်ရေး လေ့ကျင့်
ရုရှား ကာကွယ်ဆေး ရဲ့ အမှောင်ဖက်ခြမ်း က ဆိုးကျိုး ဖြစ် စဉ်တွေ ကို ရုရှား သတင်း အေဂျင်စီ က ဖွင့်ချ လိုက်ပြီ
တရားဝင် သိုင်း ပြိုင်ပွဲ မှာ သုံးလိုက်တဲ့ လက်နက်ပုန်း ကို ဖြေရှင်းချက် ကောင်းကောင်း မပေးနိုင်ရင် ရာသက်ပန် သမ္မတ အိမ်မက်ပါ လန့်နိုး ရတော့မယ့် ရှီတရုတ်
မြန်မာပြည်သူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ရရှားထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တကယ်ပဲ ထိရောက်မှာလား၊ အန္တရာယ်ကင်းရဲ့လား…
အေအေ ကို မဖိတ်ပဲ ကန့်သတ်လိုက်မှုကြောင့် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် အဖွဲ့ (၂၁) ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံတက် ဖို့ မသေချာသေး ဟုဆို
အစိုးရ နဲ့ စစ်တပ်ကြားက အမြတ်ကြီး ထွက်နေကြသူများ ( သို့ ) ထိုင်းနယ်စပ် က တရုတ်တို့ မြို့သစ်